“Momma Mo Bo Ntɔ Mo Yam! Madi Wiase So Nkonim” (Yohane 16) | Yesu Asetena
ƐRENKYƐ NA YESU AGYA ASOMAFO NO HƆ
ASOMAFO NO AWERƐHOƆ BƐDAN ANIGYE
Ná ɛrenkyɛ na Yesu ne asomafo no afiri abansoro dan no mu akɔ. Bere a wɔdii Twam no wiei no, ɔmaa wɔn afotusɛm pii, na afei ɔkaa sɛ: “Maka yeinom akyerɛ mo na biribi anto mo suntidua.” Adɛn nti na ɔkaa saa asɛm no? Ɔkyerɛɛ mu sɛ: “Nkurɔfoɔ bɛtu mo afiri hyiadan mu. Nokwasɛm nie, dɔn no reba a obiara a ɔbɛku mo no bɛsusu sɛ ɔde resom Onyankopɔn.”—Yohane 16:1, 2.
Ná saa asɛm no bɛma asomafo no koma atu kakra. Ɛwom, na Yesu adi kan aka akyerɛ wɔn sɛ wiase bɛtan wɔn, nanso wanka no pen sɛ wɔbɛkum wɔn. Adɛn ntia? Yesu kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mfitiaseɛ no manka yeinom ankyerɛ mo, ɛfiri sɛ na mewɔ mo nkyɛn.” (Yohane 16:4) Afei deɛ na ɔrehyɛ wɔn kɔn mu den ansa na wakɔ. Ɛno bɛboa wɔn na akyiri yi, biribiara anto wɔn hintidua.
Yesu toaa so sɛ: “Merekɔ deɛ ɔsomaa me no nkyɛn, nanso mo mu baako mpo mmisaa me sɛ, ‘Ɛhe na worekɔ?’” Saa anwummere no ara, na wɔadi kan abisa no baabi a ɔrekɔ. (Yohane 13:36; 14:5; 16:5) Nanso saa bere yi deɛ, nea ɔkaa sɛ nkurɔfo de bɛyɛ wɔn no, na ɛho awerɛhoɔ ama wɔabotow. Enti anuonyam a ɛda hɔ retwɛn no anaa mfaso a ɛde bɛbrɛ nokware asomfo no, wɔantumi mpo ammisa no ho hwee. Yesu kaa sɛ: “Ɛsiane sɛ maka yeinom akyerɛ mo nti, awerɛhoɔ ahyɛ mo akoma mã.”—Yohane 16:6.
Afei Yesu kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: “Ɛyɛ ma mo sɛ merekorɔ. Na sɛ mankɔ a, ɔboafoɔ no remma mo nkyɛn da; na sɛ mekɔ a, mɛsoma no aba mo nkyɛn.” (Yohane 16:7) Honhom kronkron na Yesu de boa ne nkurɔfo a wɔwɔ asase so baabiara, na sɛ ɛbɛba n’asuafo no so a, gye sɛ ɔwu na ɔnyane kɔ soro.
Sɛ honhom kronkron no ba a, ɛbɛma “wiase no adanseɛ a ɛdi mũ afa bɔne ne tenenee ne atemmuo ho.” (Yohane 16:8) Enti wiase no bɛhu sɛ wɔadi mfomso kɛse sɛ wɔannye Onyankopɔn Ba no anni. Sɛ Yesu kɔ soro a, obiara bɛhu sɛ na ɔyɛ ɔtreneeni na ɛbɛda adi sɛ Satan a ɔne “wiase sodifoɔ no” fata atemmu.—Yohane 16:11.
Yesu toaa so sɛ: “Mewɔ nsɛm pii ka kyerɛ mo, nanso morentumi nsoa seesei.” Sɛ ɔhwie honhom kronkron gu wɔn so a, afei wɔbɛnya “nokorɛ no nyinaa mu” ntease na ama wɔde nokware no abɔ wɔn bra.—Yohane 16:12, 13.
Yesu kaa asɛm bi a na asomafo no nhu nea ɛkyerɛ. Ɔkaa sɛ: “Aka kakraa bi na monhu me bio, na aka kakraa bi nso mobɛhu me.” Wɔbisabisaa wɔn ho nea saa asɛm no kyerɛ. Yesu huu sɛ wɔrepɛ abisa no, enti ɔkyerɛɛ mu sɛ: “Nokorɛ, nokorɛ, mese mo sɛ, mobɛsu abɔ bena, nanso wiase bɛdi ahurisie; mobɛdi awerɛhoɔ, nanso mo awerɛhoɔ no bɛdane anigyeɛ.” (Yohane 16:16, 20) Akyiri yi, sɛ wɔkum Yesu a, nyamesom mpanimfoɔ no ani bɛgye na asuafo no deɛ, wɔbɛdi awerɛhoɔ. Nanso sɛ wɔnyane Yesu a, wɔn awerɛhoɔ no bɛdan anigye. Sɛ ɔhwie Onyankopɔn honhom kronkron no gu wɔn so a, ɛnde anigye no bɛkyɛn koraa.
Yesu de asomafo no tebea totoo ɔpemfo a awo aka no ho kaa sɛ: “Ɔbaa, sɛ n’awoɔ duru a, ɔdi awerɛhoɔ, ɛfiri sɛ ne dɔn aduru; nanso sɛ ɔnya wo akɔkoaa no a, ɔnkae ahohia no bio ɛsiane anigyeɛ a wanya sɛ wawo onipa aba wiase nti.” Yesu kaa asomafo no koma too wɔn yam sɛ: “Mo nso, seesei moredi awerɛhoɔ; nanso mɛhu mo bio ama mo akoma adi ahurisie, na obiara ntumi nnye mo anigyeɛ no mfiri mo nsam.”—Yohane 16:21, 22.
Ɛbɛsi saa bere no, na asomafo no mmisaa biribiara wɔ Yesu din mu da. Nanso afei deɛ ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Saa da no mobɛbisa [Agya no] wɔ me din mu.” Adɛn nti na na ɛsɛ sɛ wɔyɛ saa? Ná Agya no mpɛ sɛ ɔtie wɔn anaa? Dabi, efisɛ Yesu ankasa kaa sɛ: “Agya no ara pɛ mo asɛm, ɛfiri sɛ mopɛ m’asɛm . . . sɛ Agya no nanmusini.”—Yohane 16:26, 27.
Ɛbɛyɛ sɛ Yesu nsɛm no maa asomafo no nyaa akokoduru, enti wɔkaa sɛ: “Yei nti yɛgye di sɛ wofiri Onyankopɔn nkyɛn na ɛbaeɛ.” Ná biribi rebɛsi ama wɔakyerɛ sɛ wɔgye saa asɛm no di anaa. Yesu kaa nea ɛrebɛsi no ho asɛm sɛ: “Hwɛ, dɔn no reba, na nokwasɛm nie, aduru sɛ mobɛhwete ama obiara akɔ ne fie na moagya me nko ara.” Nanso ɔmaa wɔn awerɛhyem sɛ: “Maka yeinom akyerɛ mo na monam me so anya asomdwoeɛ. Mo ho rehiahia mo wiase deɛ, nanso momma mo bo ntɔ mo yam! Madi wiase so nkonim.” (Yohane 16:30-33) Enti, Yesu anyi wɔn baako amma wɔn. Ná ɔnim sɛ Satan ne wiase no de sɔhwɛ bɛba wɔn so. Nanso na Yesu gye di sɛ wɔbɛtumi adi wiase so nkonim te sɛ ɔno ara na wɔde gyidi ayɛ Onyankopɔn apɛde.
Dɛn na Yesu kaa sɛ ɛbɛto asomafo no a enti wɔyɛɛ basaa?
Adɛn nti na asomafo no antumi ammisa Yesu asɛm biara bio?
Mfatoho bɛn na Yesu de kyerɛɛ sɛ asomafo no awerɛhoɔ bɛdan anigye?